नेपालकै पहिलो अनलाइन स्कुल बनाऔं 無限大にふくらむ夢の学校を、ぼくの故郷ネパールに。（ライ シャラド（YouMe Nepal 代表) 2018/10/22 投稿） - クラウドファンディング READYFOR
नेपालकै पहिलो अनलाइन स्कुल बनाऔं
This post is for Nepali people who do not understand Japanese language.
यूमी Online स्कुलको लागि सहयोगको अनुरोध
मेरो नाम शरद राई हो ।
२०१४ सालमा टोक्यो विश्वविधालयबाट आफ्नो पढाइ सकाएर हाल सफ्टबैंक हेडअफिसमा कार्यरत छु ।
हामीले २०११ सालमा खोटांग र २०१७ सालमा मोरंगमा यूमी स्कुल स्थापना गरी संचालन गरिरहेका छौं । हाल ती स्कुलहरुमा ३६० भन्दा बढी विधार्थीहरु पढिरहेका छन् । हामीले यूमी स्कुल किन शुरुवात गर्यौं त ?
२०१६ सालमा टोक्योमा भएको मोतेवान स्पिच कन्टेस्टमा बिजयी भइ, पुरस्कार स्वरुप पाएको ११ लाख येनले स्कुल बस किनेका छौं ।
म १० वर्षको हुँदासम्म गाउँकै स्कुलमा पढें । तर १० वर्षको उमेरमा राष्ट्रव्यापी रुपमा भएको बुढानीलकण्ठ स्कुलको भर्नामा भाग्यवश म पनि छात्रव्रित्तीमा छनौट भएँ । कक्षा ४ देखि कक्षा १२ सम्म मलाई राष्ट्रले पढायो, हुर्कायो, खुवायो, दिनु जति थियो सबै दियो । त्यसैको फलस्वरुप मैले जापानमा स्नात्तकोत्तर सम्मको अध्ययन पनि पूरा गर्न पाएँ । राम्रो स्कुलमा पढ्ने अवसर पाएर मेरो जिन्दगीले त कोल्टे फेर्यो, तर मसंगै १० वर्षको उमेरसम्म पढेका मेरा साथीहरुले त्यस्तो अवसर प्राप्त गर्न सकेनन् । उनीहरुले गाउँकै सरकारी स्कुलमा पढ्नु पर्यो, जसको कारण लगभग सबैजना अहिले मलेसिया र साउदी अरबतिर पसिना बगाउनु परेको छ । दुख लाग्छ, अफशोच नि लाग्छ, यो देशले मलाई मात्र नभएर किन सबै मेरा साथीहरुलाई मलाई जस्तै राम्रो स्कुलमा पढ्ने अवसर दिएन भनेर । त्यसैले मैले मेरो ठूला भैसकेका साथीहरुको भविष्य त परिवर्तन गर्न सक्दिन, तर उनीहरुका भर्खर जन्मदै गरेका नानीहरुको भविष्य त बनाउन सक्छु भन्ने लागेर पहिलो यूमी स्कुल खोलेका हौँ ।
यूमी स्कुल खोल्नको अर्को पनि कारण छ । मैले बच्चामा पढेको माविको २०१० सालको एसएलसी (हाल एसइइ) परीक्षाको नतिजा । जम्मा ७१ जनाले त्यो साल एसएलसी दिएका रहेछन्, तर कसैले नि उत्तीर्ण हुन सकेनन् । त्यसैले त्यो वर्ष कोही पनि आइए पढ्न जान सकेनन् । यो नतिजा सुन्दा म विश्वविधालयको चौथो वर्षमा थिएँ । धेरै दुख लाग्यो । यदि सरकारी स्कुलहरुमा पढ्दा विधार्थीहरुको भविष्य कतार र मलेसियामा हुने हो भने, अब मेरो गाउँको बच्चाहरुको भविष्य बनाउन मैले केहि गर्नुपर्छ भन्ने संकल्प लिएँ । त्यसैको उपज हो यूमी स्कुल ।
गएको ७ वर्षको पहलबाट हामीले दुई ओटा स्कुलहरुमा ३६० जना विधार्थीहरुको भविष्य त बनाउन कोशिश गर्दैछौं, तर नेपालमा झन्डै ५०,००० ओटा जस्ता सरकारी स्कुलहरु छन् जहाँ झन्डै पचास लाख विधार्थीहरु पढ्ने गर्छन् । अहिलेकै अनुसारले हामीले स्कुलहरु बनाउंदै गए नेपालभरका विधार्थीहरुलाई राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न हामीलाई झन्डै १२०,००० वर्ष लाग्ने रहेछ । र यो असम्भव हुनेछ ।
त्यसैले हामीले नयाँ उपाय सोच्यौं, अनलाइन शिक्षा ।अहिलेको जमाना इन्टरनेटको जमाना हो । १० वर्षसम्म असम्भव मानिएको कुरा अहिले इन्टरनेटले सम्भव बनाइदिएको छ ।
काठमान्डौमा रहेका दक्ष शिक्षकहरुले विकट ठाउँका सरकारी स्कुलहरुमा अनलाइन पढाउने । यो माध्यमबाट जापानको तोदाई नेट एकेडेमी भन्ने कम्पनीले सफल परिक्षण गरिसकेको छ ।
उदयपुर जिल्लाको लिम्चुन्ग्बुंग गाउँपालिकाका सरकारी स्कुलहरुमा पढ्ने विधार्थीहरुलाई पढाइने छ । अनलाइन शिक्षा प्रणालीको लागि चाहिने टावर पनि मेजर दाइले बनाइसक्नुभएको छ । इन्टरनेटको लागि अझ महाबिर पुन दाइसंग पनि सहकार्य गरिरहनुभएको छ ।
दक्षिण कोरियामा ८ वर्ष काम गरेर आउनुभएका यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेजर राईको एउटा ठूलो सपना छ । त्यो सपना नेपालका ७६६ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा लिम्चुन्ग्बुंग गाउँपालिकालाई शिक्षाको क्षेत्रमा सर्वश्रेष्ठ गाउँपालिका बनाउने । त्यहीं सपनालाई ३ वर्षभित्र साकार पार्ने हाम्रो जमर्को हो ।
लिम्चुन्ग्बुंग गाउँपालिकाका युवा अध्यक्ष मेजर राईसंग (Right) यूमी नेपालका प्रताप अधिकारी
साथै नेपालकै सबैभन्दा राम्रो मध्यको एक IT कलेज डिअरवाक इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले पनि हामीलाई सहयोग गर्ने भएको छ ।
कहिले, कसरी गर्ने ?
२०७५ सालमा SEE परीक्षा दिने विधार्थीहरुलाई काठमान्डौका दक्ष शिक्षकहरुले अनलाइन पढाउनेछन् । SEE मा अनुत्तीर्ण हुने ९० प्रतिशत विधार्थीहरु अंग्रेजी, हिसाब या विज्ञानमध्य कुनै एक विषयमा अनुत्तीर्ण हुन्छन् । त्यसैले, हाम्रो अनलाइन स्कुलमार्फत यिनै तीन विषयहरु पढाइने छ । पोहोर साल लगभग ३०० जना विधार्थीहरुमा मात्र ४ जना सबै विषयमा उत्तीर्ण भए । यो वर्ष पनि लगभग ३०० जना विधार्थीहरुले SEE परीक्षा दिनेछन्, जसबाट हामी ४० जना अर्थात पोहोर भन्दा १,००० प्रतिशत धेरै उत्तीर्ण गराउने हाम्रो लक्ष्य छ ।
यो अभियानको लागि कति खर्च लाग्छ ?
जम्मा ७० लाख येनको आवश्यक छ ।
हालसम्म जम्मा रकम कति संकलन भयो ?
कहिलेसम्म ७० लाख जम्मा पार्नुपर्छ ?
नोभेम्बर २ तारिख, २०१८
नोभेम्बर २ सम्म ७० लाख उठेन भने के हुन्छ ?
अहिलेसम्म जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । अर्थात १ येन पनि हामीले पाउने छैनौं ।
तपाईंले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ?
तलको लिंकमार्फत क्रेडिट कार्डबाट सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
क्रेडिट कार्ड नहुने साथीहरुले तलको बैंक खातामा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ ।
खाताको नाम：तोकुही) युमे नेपाल 　（トクヒ）ユメネパール）
बैंक खातामा पैसा पठाएर सहयोग गर्नु हुने सबैजनाको नाम यहाँ उल्लेख गरिने छ ।
नोट: यदि यो पटकको क्राउडफन्डिंगको लक्ष्य पूरा नगरिएको खण्डमा, हजुरहरुले दिनुभएको रकम फिर्ता गरिने छैन, यूमी स्कुलको लागि खर्च गरिने छ ।
होबोनिची कम्पनी, कार्यकारी निर्देशक
टोक्यो विश्वविधालय, अध्यक्षका प्रमुख सल्लाहकार
रित्सुमेइकान एशिया प्यासिफिक विश्वविधालय, अध्यक्ष
गगन बहादुर बिके
अर्थ मन्त्रालय, उपसचिव
अनलाइन स्कुलको बारे भिडियो (जापानी भाषामा)
YouMe Online School (English)